DHAGEYSO: Prof. Ismaaciil Samatar Oo Booqasho ku Tegay jiidaha dagaalka TUKARAQ, Isagoo Deeq Xoolo Gaarsiiyay Ciidanka Somaliland | Afrikada
DHAGEYSO: Prof. Ismaaciil Samatar Oo Booqasho ku Tegay jiidaha dagaalka TUKARAQ, Isagoo Deeq Xoolo Gaarsiiyay Ciidanka Somaliland
Jul 10, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Tukaraq: Waxaa Tukaraq booqasho ku tegay Profesoorka loo wareysto in uu yahay caaqil Soomaaliweyn, waxaana arrimuhu soo shaacbaxeen kadib markii Prof. Axmed Ismaaciil Samatar uu booqasho ku tegay degaanka dagaalladu ka socdaan ee TUKARAQ ee xuduudka ay isku heystaan gobollada Puntland iyo Somaliland.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Axmed Ismaaciil Samatar uu jiidaha hore ee dagaalka geeyay lacag iyo sahay ciidanka Somaliland uu u qeybiyay.
Booqashada Axmed Ismaaciil Samantar uu ku tegay TUKARAQ ayaa ka dhigaysa arrinta mid ka sii xiisad badan sidii hore, waxaana arrintan ay ka yaabisay Soomaalida wax ka dhegaysata professorka marka uu ka hadlayo idaacadaha.
Idaacadaha kala gedisan ee reer Galbeedka gaar ahaan VOA-da iyo BBC ayaa si aad ah u buun-buuniya labada professor ee walaalaha ah iyadoo idaacadahaasi ay ka dhigeen raggaasi kuwo Soomaaliya oo dhan ugu caqliga badan.
Sidoo kale Warfidiyeenkani reer Galbeedka ayaa dadka baray iyaga oo si aad ah ugu cel-celiya dhegaha shacabkana ka badiyey magacyada labadan Proffesoor, waxaa soo raaca machadka HERITAGE oo ay ka dhigaan kan ugu aqoonta badan wadanka Soomaaliya iyada oo kumanaan profesooro iyo jaamacado ay dalka Soomaaliya ku sugan yihiin.
QEYBTA LABAAD HALKAN KA DHEGAYSO:
Liiska Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Puntland oo lagu dhawaaqay DOKUMENT
Afrikada, Puntland: Xallinta khilaafaadka iyo ansixinta Baarlamanka ee Puntland ayaa goor dhow ku dhawaaqay 66-da ...
Dad badan oo ka tacsiyeeyay Geeridii ku timid Al-Fanaan Kooshin Yare
Waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyooday Marxuum Maxamuud Maxamed Koohsin (Kooshin Yare). ...
WARBIXINTA SANADKA 2018: Soomaalidu Wax Weyn ayey ku weysay ka hor imaatinka SHAREECADA ISLAAMKA, Tanina wey Ogtahay Laakiin Waxbaa ka hortaagan?!!!
- Dec 30, 2018
Afrikada, Muqdisho: Waa la wareersaday, waana laga sii darayaa marba marka ka dambeysa, lama kala ...
Mahad Salaad Oo digniin ka bixiyey in baarlamanka Soomaaliya la horkeeno sharci ka dhan ah diinta Islaamka
Afrikada, Muqdisho: Xildhibaan Mahad Salaad ayaa digniin ka bixiyey in baarlamanka Soomaaliya la horkeeno ...
DAAWO: Xaruntii Sheekh C/Weli Oo Dib boorka laga jafay iyo Qoob ka Cayaar ka daran Kii hore?
Afrikada, Gaalkacyo: Waxaa mar kale dib boorka looga jafay xaruntii uu ka geeriyooday marxuum ...